Fahad Yaasiin oo kulan isagu yeeray Farmaajo, Rooble iyo Qoor-Qoor | KEYDMEDIA ONLINE
Sida ay Keydmedia Online ogaatay, Madaxweynaha Galmduug Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor], ayaa lagu qanciyay inuu dhegaha ka fureysto baaqyada iyo qaylo-dhaanta Musharixiinta mucaaradka, ee ka dalbaday inuu bedelo xubnaha Maamulkiisa ku matela gudiyadda doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shalay waxaa ka dhacay Villa Somalia kulan albaabada u xiran, oo Fahad Yaasiin isagu yeeray Madaxweyne Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Rooble iyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor].
Macluumaadka Keydmedia Online ka heshay shirka, ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu kala hadlay saddexda Mas'uul shaxda doorashadda uu u dejiyay iyo qorshaha looga hortagayo kacdoonka Musharxiinta Mucaaradka.
Intii uu socday wadahadalka, Fahad Yaasiin ayaa u sheegay Qoor-Qoor in looga baahan yahay inuu joojiyo kulamada Mucaaradka, islamarkaana uu dhegaha ka fureysto codsiga ay usoo jeedaan ee ah inuu bedelo xubnaha Galmudug ku matelaya gudiyadda doorashooyinka oo u badan NISA.
Qoor-Qoor ayaa lagu qanciyay inuu taageero dib u doorashadda Farmaajo, isagoo loo sameeyay balan-qaadyo waaweyn, oo ay ku jirto in Ra'iisul Wasaaraha soo socda uu isaga noqon doono ama qof uu keenay, maadama kursiga Hawiye yeelanayo hadii qof Daarood ah Madaxweyne noqdo.
Xogaha Keydmedia Online heshay waxay intaasi ku darayaan in Ra'iisul Wasaare Rooble la kulmi doono Musharixiinta Mucaaradka si cadaadiska Beesha Caalamka isaga weeciyaan, isagoo la qaadan doono wadahadallo ku xiran danaha iyo rabitaanka Farmaajo.
Rajada Farmaajo inuu markale Madaxweyne noqdo ayaa aad u xooggan, hadiii aan la bedelin shaxda uu Fahad Yaasiin u dejiyay doorashooyinka, ee ah in gudiyadda hadda dhisan qabtaan doorashadda, sidoo kale qof kasta oo Xildhibaan noqonaya lasoo marsiiyay xafiiskiisa, si uu u hubiyo.
Ma jiro jacayl shacabka u hayaan Farmaajo hadda, waxaana baaba'ay taageeradii loo muujiyay doorashadiisii 2017, kadib markii uu fulin waayay balan-qaadyadii uu sameeyay, oo ay kamid yihiin uu 2 sano gudahooda Al-Shabaab uga saarayo dalka, inuu furayo jidadka xiran iyo inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah.
0 Comments Topics: fahad yaasiin farmaajo qoor-qoor rooble